Dardaaranki Rasuulkeeni Abu-Qaasim CSW: Dadka Waxaa Hagi-doona Shahwadooda .. Ragu Waxay Isu Ekeysin-doonaan Haweenka .. Kuwa Ugu Xun Baa Talin-doona
Cllaahi Ibn Cabaas (RC) waxaa uu yiri: in Nabi Muxammad markii uu dhameystey xajkiisii ugu dambeeyey oo ku beegneyd sanaddii10aad ee Hijriyada uu hor istaagey iridda laga galo Kacbada Barakeysan, isago gacanta ku haya Qufulka iridaasi, isla markaana ku dhahaya asxaabta:
" MA IDIN SHEEGAA ASTAAMAHA MAALINTA QIYAAMAHA LAGU GARTO?
Salmaan Faarisi oo ka mid ah ahaa asxaabta isla markaana taagnaa meel u dhow nabiga CSW, ayaa yiri: Haa Yaa Rasuulu Allah CSW inoo sheeg’
Rasuulka ayaa markaa yiri: Xaqiiqo ahaan astaamaha lagu garto inay soo dhowaatey saacadda waxaa ka mid ah
1) In Dadku ay salaadda dhayalsadaan.
2) Dadku waxay u hogaansami-doonaan hawadooda ama shahwaad-kooda.
3) Waxay ku dadaali doonaan inay naftooda uun u roonaadaan, waxayna aad u xishmeyn doonaan dadka maalqabeenka ah.
5) Waqtigaasi la joogo ruuxa iyo qalbiga Muminka ah waxay noqon doonaan kuwo murugo darteed u milma, sida milixda ay ugu milanto biyaha, waayo Mu’minku waxaa uu arki doonaa waxyaabo la xaaraan-timeeyey oo lagu dhaqmayo, mana awoodo inuu wax ka bedelo.
Salmaan Faarisi ayaa markaa yiri: Waxaasi ma dhici doonaan Yaa Rasuulu Allah CSW?
Rasuulka CSW ayaa yiri: haa waxaan ku dhaaranayaa Rabiga nafteyda ay gacantiisa ku jirto,
7) Wasiiraduna waxay noqon doonaa kuwo Caasiyaal ah .
8) Kuwa xilalka loo dhiibana ee amaanada lagu maaniye waxay noqon doonaan kuwo wax khiyaameeya.
9) Xaqiiqdii watigaasi xumaanta waxaa loo arki doonaa wanaag, wanaagana waxaa loo arki-doonaa xumaan
10) Kuwa wax khiyaana waxaa loo arki doonaa kuwo Aamin ah, kuwa Aaminka ahna waxaa loo arki doonaa ianya waxa khiyaameeyaan.
11) Kan beenta sheegana waa la Aamini doonaa, halka kan runta sheegayaa loo arki doono inuu beenaale yahay .. Waqtigaas waxaa kale oo jiri doonaa maamulo ay haween ka taliyaan.
Rasuulka CSW ayaa yiri, haa waxaan ku dhaaranayaa Rabiga nafteyda ay gacantiisa ku jirto,
18) Dadka wanaagsani waxay noqon doonaan kuwo murugeysan, maaskiintuna waxay noqon kuwo aan la xishmeyn, waxaana jiri doona oo kale suuqyo isku dhow, waxaana ganacsatdaa sida aadka igu dhaw uu mid kasta oran doonaa, anigu waxba maan iibin, kan kalena wuxuu oran anigu wax faaido ah maan helin. Sidaa darteed ma wayn doontid qof ilaah u cabanaya Subxaanahu watacaalaa.
19) Salmaanow Waxaa dhici doonta in dadku hadii ay ka hadlaan arrimaha dadka talada haya,waxay la kulmi doonaan Dil, hadii ay Aamusaanna, waxaa khasab lagaga qaadi hantidooda, wax xishamd ah lama siin doono, dhiigooda ayaa la daadin, dadkana quluubtooda waxaa ka buuxsami cabsi, mana arki doontid ruux, ilaa ruuxaasi uu noqdaa mooyee mid aad u baqaya, isla markaana la argagax geliyey.
21) Salmaanow Waqtigaasi Ragga waxay haeysan doonaan Rag kale, haweenkuna waxaya sidoo kale haysan doonaan haween kale.
23) Raggu waxay isku ekeysiin doonaan haween,
haweenkuna waxay isku ekeysiin rag.
28) Waqtigaasi raggu waxay isticmaali doonaan Dahabka oo ay xarago ahaan u xiran doonaan, waxaya kaloo xiran doonaan xariirta, isla markaan awaxa kaol oo ay isticmaali doonaan Hragga shabeelka.
35) Kuwa ugu xunna waxay u talin doonaa ummadeyda
38)Waxaa kale oo jiri doona dad diinta baran doona , oo iyaguna aan Allah dartii sidaa u sameyneyn.
40) Salmaanow Waxaani oo idil waxay dhaci doonaan, mar xishmadii ay suushey, dunuub badanna la geli doono, dadka xun xun ay u talinayaan amaba ay korka ka heystaan kuwa wanaagsan.
41) Beenta ayaa faafi doonta, waxaana dhici doona cay iyo doodo hadalo la isku dhaafsado, miskiinimada yaa iyana baahi doonta.
44) Dadku waxay waqtigaasi cayaari doonaan khamaar iyo musik.
46) Qofka Mu’minka ah xushamadiisa waxay noqon mid aad u hooseysa marka la barbardhigo xitaa dadka ka shaqeeya guryaha